ကျွန်ုပ်တို့သည်ပညာရေး၊ HoReCa စက်မှုလုပ်ငန်း၊ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု၊ အိမ်၊ ရုံးများ၊ အများပြည်သူဆိုင်ရာအဆောက်အအုံများ၊ ပန်းခြံများ၊
အရည်အသွေးအာမခံ သောက်ရေ များစွာသောအဖွဲ့အစည်းများနှင့်အထူးစနစ်ထုတ်လုပ်သူများ၏ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုများ၏ဘာသာရပ်ဖြစ်သည် ရေကုသမှု.
အရည်အသွေးမြင့်သောက်သုံးရေ အဆောက်အ ဦး တစ်ခုသို့မဟုတ်မြို့ပြနေရာများတွင်ရေပေးဝေရေးနှင့်မိလ္လာစနစ်ကိုသင့်လျော်သောဒီဇိုင်း၊ တည်ဆောက်မှုနှင့်အသုံးပြုမှုကိုသေချာစေပြီး၊ အပူချိန် ၂၅ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ထက်မကျော်လွန်သင့်သောရေမငြိမ်စေရန်ရှောင်ရှားသည်။
ထိုကဲ့သို့သောသောက်သုံးသူများသည်တစ်ကိုယ်ရေသန့်ရှင်းရေးနှင့်အသုံးပြုရန်လွယ်ကူသည့်ကိရိယာများဖြစ်ပြီးအအေး (သို့) အခန်းအပူချိန်ရှိသောရေကိုလူအများအပြားအသုံးပြုသောနေရာများအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ ဤအဖြေသည်အခြားနိုင်ငံများ၌ကြာမြင့်စွာကတည်းကအသုံးပြုခဲ့ပြီးလူအများအပြားသို့သောက်သုံးရေပေးရန်လိုအပ်သည့်နေရာတိုင်းတွင်ရုံးများ၊ ကျောင်းများ၊ စက်မှုဇုန်များ၊ မီးရထားဘူတာရုံများနှင့်လေဆိပ်များအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။
COVID-19 ကပ်ရောဂါနှင့် ပတ်သက်၍ ကျွန်ုပ်တို့သည် Sanepid ၏လမ်းညွှန်ချက်များနှင့်အညီလူ ဦး ရေ၏ကျန်းမာရေးကိုဂရုစိုက်ခြင်းအားဖြင့်မြို့ပြနေရာများနှင့်အများပြည်သူဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများရှိလူများ၏ရေငတ်ပြေမှုကိုပြေလည်စေမည့်နည်းလမ်းကိုလုံခြုံစိတ်ချရသောနည်းလမ်းဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့တွေးမိသည်။
ကိုလည်းကြည့်ပါ: လက်ပိုးသန့်ဆေးရုံများ နှင့် ခြောက်သွေ့သောမြူနည်းကို သုံး၍ အခန်းများကိုပိုးသန့်ဆေးပေးသည့်စနစ်များ
ရွေးချယ်တဲ့အခါ နွေ ဦး ရာသီသောက်သုံးရေ သို့သော်မှတ်သားရမည့်အချက်အနည်းငယ်ရှိပါသည်
ကျနော်တို့က, သင်တန်း, ယူဆ ကျွန်ုပ်တို့၏ဘုံဘိုင်မှစီးသောရေ ၎င်းသည်အလွန်ကောင်းမွန်သောအရည်အသွေးရှိပြီး၎င်းကိုအနီးဆုံးသန့်ရှင်းရေးနှင့်ကူးစက်ရောဂါကုသရေးဌာန၌သင့်လျော်သောစစ်ဆေးမှုများကိုမှာယူခြင်းအားဖြင့်အလွယ်တကူဆုံးဖြတ်နိုင်သည်။ ဒါကြောင့်ငါတို့အထဲကလှည့်ပါ ရေကိုပုတ်ပါ အရည်အသွေးမြင့်မားပြီးသောက်ရေသန့်များကိုလည်းသုံးနိုင်သည်။
ဒီ သောက်စား ရေအိုးများဟုလည်းလူသိများသောကြောင့်၎င်းသည်ဟင်းလျာများမလိုအပ်ဘဲသန့်ရှင်းအေးမြသောရေကိုအသုံးပြုရန်ခွင့်ပြုသည့်ကိရိယာဖြစ်သည်။ သန့်ရှင်းပြီးကျန်းမာသည့်ရေကိုအချိန်မရွေး၊ အမြောက်အမြားနှင့်လူတိုင်းရရှိနိုင်ပါသည်။
သောက်သုံးရေ spas ၎င်းတို့ကိုကျောင်းများ၊ သူငယ်တန်းများ၊ လုပ်ငန်းခွင်များ၊ ရုံးများနှင့်ဖောက်သည်များနှင့် guests ည့်သည်များ၊
လွတ်လပ်စွာရပ်တည်နေသောသောက်သူများသည်တစ်နေရာတည်းတွင် ပို၍ အလုပ်လုပ်ကြပြီး၊ အခြားသူများကိုမူအရက်သောက်ကြသည်။ တခါတရံရေအေးစနစ်မလိုအပ်ပါ။ အချို့သောသောက်သုံးရေစမ်းရေတွင်းများတွင်ဥပမာအားဖြင့်ပုလင်းတစ်လုံးကိုဖြည့်ရန်ပိုမိုလွယ်ကူစေရန်နောက်ထပ်အသာပုတ်ပါ။ သောက်သုံးရေအရင်းအမြစ်များကိုခြေနင်း၊ ခလုတ်တစ်ခုသို့မဟုတ်ဖိုတေးလ်တို့ဖြင့်ဖွင့်နိုင်သည်။ ကိရိယာအချို့ကိုလည်းတပ်ဆင်ထားသည် ရေစစ်စက်များ.
သောက်ရေသန့်စမ်းရေ၏အငြင်းပွားဖွယ်ကောင်းသည့်အချက်မှာ ၄ င်းတို့ကိုရေပေးဝေရေးစနစ်နှင့် ချိတ်ဆက်၍ ရေကို သုံး၍ ဖြစ်နိုင်သည်။ ၎င်းသည်ရေပုလင်းများပြန်လည်ဖြည့်ခြင်းပြtheနာကိုလုံးဝပျောက်ကွယ်စေပြီးပလပ်စတစ်ခွက်များမသုံးဘဲတစ်ကိုယ်ရေသန့်ရှင်းမှုနှင့်ဂေဟစနစ်ကိုအသုံးပြုသည်။
ရှေ့ / နောက်ပြားများကို corten သံမဏိသို့မဟုတ်အမှုန့်ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောသံမဏိသို့မဟုတ်သံမဏိဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည်။ ဆန်ခါကိုသံမဏိဖြင့်ပြုလုပ်သည်။
ခေတ်ပြိုင် ဗိသုကာအတွက်ခေတ်ရေစီးကြောင်း ၎င်းတို့သည်သောက်ရေသန့်ထုတ်လုပ်သူများအားရေပန်းစားသောပုံစံနှင့်အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်စေရန်နှင့်သူတို့၏ထုတ်ကုန်များတွင်သီးသန့်ပစ္စည်းများနှင့်ခေတ်မီဒီဇိုင်းများကိုအသုံးပြုရန်စီမံကိန်းများကိုအကောင်အထည်ဖော်ရန်တွန်းအားပေးသည်။ အဆိုပါကမ်းလှမ်းချက်ကိုဂန္ဒီဇိုင်းများနှင့်ရိုးရှင်းသောပုံစံနှင့်အတူထုတ်ကုန်နှစ်ခုလုံးပါဝင်သည်။
ယနေ့တွင် ဥယျာဉ်စမ်းရေတွင်း ထို့ကြောင့်သူတို့သည်အလှဆင်ခြင်းသာမကအာကာသအတွင်းအလှဆင်ခြင်းသာမကအရည်အသွေးမြင့်သောက်သုံးရေကိုပါထောက်ပံ့ပေးနိုင်သည်။
အချို့မော်ဒယ်များ သောက်စား ၎င်းတို့သည်တိရိစ္ဆာန်များအတွက်လည်းရည်ရွယ်သည်။
သောက်သုံးရေ spas များသည်ပုလင်းရေသောက်သည့်အခါသို့မဟုတ်ပလပ်စတစ်ခွက်များအသုံးပြုသောအခါအမှိုက်သရိုက်ပမာဏလျှော့ချခြင်းဖြင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကိုဂရုစိုက်ရန်ကူညီသည်။
အချို့သောကိရိယာများသည်သင့်အားအခန်းအပူချိန်၊ အအေး၊ ၎င်းသည် ၀ န်ထမ်းများအားသန့်ရှင်းသောသောက်သုံးရေရရှိရန်အလွယ်တကူထောက်ပံ့ပေးနိုင်သောအလုပ်ရှင်များအတွက်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်သည်။
Pro-Stream ရေပေးစက်။ အေး, ပူနှင့် fizzy ရေ။ အသေးစိတ်ကိုကြည့်ရန် ဒီမှာ
ပြင်ပနေရာများ၌အသုံးပြုသောသောက်ရေအချို့ကိုအထူးအေးခဲသောအဆို့ရှင်များ အသုံးပြု၍ တစ်နှစ်ပတ်လုံးအသုံးပြုနိုင်သည်။
မျက်မှောက်ခေတ်သောက်သုံးရေ - စမ်းရေသည်ကလေးငယ်များနှင့်သက်ကြီးရွယ်အိုများကိုအလွယ်တကူသုံးနိုင်သည်။ သောက်သူ၏ပစ္စည်းကိရိယာကိုအသုံးပြုသူလူ၏အမြင့်နှင့်လိုက်လျောညီထွေမှုရှိခြင်းကြောင့်ဤစမ်းရေသည်အသုံးပြုရန်အလွန်လွယ်ကူသည်။
ရေနွေ ဦး ဆက်စပ်ပစ္စည်းများကွန်ကရစ်ဥယျာဉ်စမ်းရေတွင်းအရင်းအမြစ်၏ဆောက်လုပ်ရေးကိုထိပုတ်ပါရေသောက်သုံးခြင်းရှိမရှိအရင်းအမြစ်မှရေသည်ကျန်းမာပါသလားသောက်ဘို့ filterဥယျာဉ်ကိုကက်စကိတ်စမ်းရေတွင်းဥယျာဉ်စမ်းရေတွင်းကွန်ကရစ်ဥယျာဉ်စမ်းရေတွင်းဥယျာဉ်စမ်းရေတွင်းစျေးနှုန်းကလေးများအတွက်ဥယျာဉ်စမ်းရေတွင်းကြီးမားသောဥယျာဉ်စမ်းရေတွင်းဘယ်လိုဥယျာဉ်စမ်းရေတွင်းကျောက်ဥယျာဉ်စမ်းရေတွင်းသေးငယ်တဲ့ဥယျာဉ်စမ်းရေတွင်းခေတ်သစ်ဥယျာဉ်စမ်းရေတွင်းbacklit ဥယျာဉ်စမ်းရေတွင်းဥယျာဉ်စမ်းရေတွင်းထုတ်လုပ်သူဥယျာဉ်စမ်းရေတွင်းကိုဆွဲဥယျာဉ်ကိုမြို့ရိုးစမ်းရေတွင်းကျောက်ဥယျာဉ်ကိုစမ်းရေတွင်းကျောက်ဥယျာဉ်စမ်းရေတွင်းသောက်ဘို့အသာပုတ်ပါသေးငယ်တဲ့ဥယျာဉ်စမ်းရေတွင်းမြို့သောက်မြို့ပြစမ်းစစ်ဝါဆmini ဥယျာဉ်စမ်းရေတွင်းခေတ်သစ်ဥယျာဉ်စမ်းရေတွင်းမင်္ဂလာပါရေအိုးသောက်စားကလေးများအတွက်သောက်ကျောင်းများရှိကလေးများအတွက်သောက်သူများလူများအတွက်သောက်ခွေးများအတွက်သောက်ကျောင်းများအတွက်သောက်သောက်သူများကိုဖုံးအုပ်ပေးပါပန်းခြံများတွင်သောက်ဝါးဝါးသောက်သူdrinkwell စုပ်စက်နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံးဥယျာဉ်စမ်းရေသောက်သုံးရေသောက်သုံးရေစံချိန်စံညွှန်းများပိုလန်အတွက်သောက်သုံးရေwarsaw သောက်ရေသောက်သုံးရေလိုအပ်ချက်နွေ ဦး ပေါက်ကနေရေရေသောက်သူမှရေယိုနေသည်ရေစမ်းအပြင်ဘက်ကိုထိပုတ်ပါရေသောက်သုံးရေ spasနွေ ဦးသောက်ရေအတွက်ရေဥယျာဉ်စမ်းဥယျာဉ်တော်၌စမ်းကျောင်းများအတွက်နွေ ဦးရေစမ်းသောက်သုံးရေအရင်းအမြစ်သောက်သုံးရေနွေ ဦး စျေးနှုန်းကျောင်းများတွင်သောက်ရေ